Beerta Digirta Abuurka | February 2020
Rifeyaha guriga: sharaxaad, haboon iyo daryeel
Editor Ee Doorashada February 26,2020
Ugu Weyn Ee Beerta Digirta Abuurka
Basal kalok: talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sii kordhaya
Basasha waa mid ka mid ah khudradda ugu badan ee loo isticmaalo, iyada oo aan taas oo ay adagtahay in la qiyaaso ugu yaraan hal cunniin qaran. Ka dib markaad haysatid urta iyo carafka, waxay soo iibsadaan qoraalo aad u macaan marka kuleylka la daaweynayo. Si kastaba ha noqotee, cunto karinta ma aha qaabka keliya ee loo isticmaalo in loo isticmaalo khudradan, sababtoo ah waxaa badanaa loo isticmaalaa daawada, sida daawada fayraska ah iyo sida suuxinta gubashada.
Agrotechnics ee beerashada basasha: xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
In cimiladeena, basasha yihiin koray muddo laba sano ah. Sannaddii kowaad waxay ku beeraan abuurka - chernushka. Basasha sevok koraan dayrta ka soo miraha kuwan, iyo guga ee sanadka soo socda waxaa lagu beeray on sariiraha. Laga soo bilaabo nalalka waaweyn ayaa koraan xilliga dayrta. Basasha waa dalag cagaaran oo aad loo jecel yahay ee dalalka badankood. Waxaa la koray mudo dheer waxaana loo isticmaalay daawada dhaqameedka iyo karinta.
Sida loo abuuro xamaamka: talooyin dhameystiran
Canab ee keena farxad - noocyo kala duwan oo "Glow"
Doorashada kuleyliyaha si loogu isticmaalo guryaha gaarka loo leeyahay
Sida loo daweeyo acidosis ee lo'da
Cajinta taranka (caadiga ah): sifooyinka beeraha iyo daryeelka
Dabocase - khudradda guga aan qabin. Wuxuu si fudud u qaboojiyaa qabow iyo dhaxan wuxuuna siinayaa fiitamiinada dadka marka dhaqamada kale ay bilaabaan inay beeraan. Haddii si wanaagsan loo beeray radishes, leh waqtiga lagama maarmaanka ah, si sahlan ayaad u heli kartaa goosashada fiican ee xididkan dhadhan fiican leh. Read More
Hortensia paniculata grandiflora - sifooyinka daryeelka iyo dhalmada ee goob beerta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerta Digirta Abuurka 2020